131 Horyaalkii Halyeeyada ee hal sawir | Abuurista khadka tooska ah
191 saacadood si loo sawiro 131 League of Legends champions
MOBAs waa ciyaaraha fiidiyowga ee ciyaartoy badan taas oo koox ciyaartoy ah ay la kulmaan kuwa kale oo badan guushii ugu dambaysay. Nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee fasallada ka dhigaya ciyaartoydu inay helaan qaab ciyaareedkooda gaarka ah si ay u gaaraan guul una sii wadaan dhibcaha iyo sharafta.
Laakiin waxaa jira hal MOBA oo ka mid ah kuwa la heli karo oo dhan oo soo jiitay dareenka ugu badan malaayiin ciyaartoy adduunka oo dhan ah, League of Legends. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'LoL', hadda waa farshaxanyahan ku qaatay 191 saacadood inuu sawiro dhammaan 131-ka horyaal ee cayaartan fiidiyowga caanka ah.
LoL waxay sidoo kale hubisay in eSports, tartamada ay ciyaartoy badani ku tartamaan lacag aad u tiro badan, ay sii socdaan isu keenida dad aad iyo aad u tiro badan Dunida oo dhan iyo wadamada qaar, sida Kuuriyada Koofureed, kuwa ugu fiican waa shakhsiyaadka bulshada iyo dadka caanka ah, sida Cristiano Ronaldo ama Messi halkan.
Sababtaas awgeed, waqti ka waqti ayaan ka helnaa qaar soo jeedin farshaxan culus sida Christopher Cayco, oo mas'uul ka ah sawirkan oo ay ku jiraan dhammaan horyaallada ilaa Taliyah hal sawir.
Waxay ahayd Chris qudhiisa, kii sanadkii hore u yimid inuu barbaro galo sawir epic ah oo ka kooban 721 Pokémon. Xitaa aad ayaan u nasiib badanahay inaan awood u leenahay inaan fiidiyoow ka helno abuure isku mid ah kaas oo uu ku muujinayo geeddi-socodka hal-abuurka oo dhan ee horseeday shaqadan muujinta weyn. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad iibsato daabacado laga soo xigtay.
para taageerayaasha MOBA-daan Waa gabal si aad ugu daabacdo boosta qolka u noqon karo fikrad weyn. Ciyaar fiidiyoow ah oo xitaa u keentay kumbuyuutarrada da 'dahabi ah labaad iyo kanaalada sida' Twitch 'waxaa daawada boqolaal kun oo qof maalin kasta.
Ku saabsan ciyaaraha videog iyo daboolkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 191 saacadood si loo sawiro 131 League of Legends champions
15ka shandadood ee shaaha ugu hal abuurka badan dadka jecel cuntadan macaan
Warqadda warqadda ee warqadda ah oo sidoo kale ah kiniin jaantus ah